कुन राशी भएका मानिसको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ ! – Hamrosandesh.com
कुन राशी भएका मानिसको भाग्य विवाहपछि चम्किन्छ !
प्रायजसो मानिसहरु विवाह गरेपछि वा विवाह नहुनुअघि निकै नै फरक देखिन्छन् । कुनै मानिस विवाह गरेपछि निकै नै खुसी हुन्छन् भने कुनै मानिस निकै नै निराश वा दुःखी हुने गर्छन् । त्यस्तै, नयाँ जानकारीको लागि यदि तपाईंको नामको अगाडीको अक्षर ही, हू, हे, हो, डा, डू, डी, डे वा डो आउँछ भने तपाईंको राशी कर्कट हो यो राशी हुने मानिसहरुको विवाहपछि निकै नै भाग्य चम्किने ज्योतीष शास्त्रको दाबी समेत रहेको छ ।
त्यस्तै, कर्कट राशी हुने मानिसहरु इमान्दार, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ पनि हुने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ कर्कट राशी हुनेहरुको जीवनमा विवाहको कुरा चल्दा आफ्ना आमाबाबुले हस्तक्षेप गर्छन् जुन कुरा उनीहरुलाई भने मन पर्दैन् । तर विवाह भएपछि निकै नै सुखी हुन्छन् ।
कर्कट राशीको मानिसको भाग्योदय विवाहपछि नै हुन्छ विवाह पछि भाग्य र परिवर्तन यस राशीको मानिसको जीवनमा विवाहले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । यो राशी हुनेहरुको भाग्य विवाहपछि खुल्नेछ । विवाह गरेपछि यिनिहरुले जुन काममा हात हालेपछि सफल हुनेछ कर्कट राशी हुने मानिसहरुले आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गरिरहने बानी हुन्छ । यो राशीका मानिसहरु एकदमै परिश्रमी र इमान्दार हुन्छन् ।